အမျိုးသမီးများအားနှုတ်ဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အခန်းကဏ္ofကိုပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (1987) - Your Brain On Porn
အကြမ်းဖက်မှု Vict ။ 1987 Fall;2(3):189-209.
Sommers ek1, ဖက်စပ် Check.
အထီးကျူးကျော်များနှင့်ညစ်ညမ်း၏လေ့လာမှုများအတွက်, လူမှုရေးစိတ်ပညာရှင်အထီးများကညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုဟာသူတို့ရဲ့ရန်လိုနှင့်အမျိုးသမီးဆီသို့ antisocial သဘောထားတွေတိုးပွါးကြောင်းသီအိုရီကိုထောကျပံ့ဖို့သက်သေအထောက်အထားတွေ့ပြီ။ အဆိုပါသုတေသနကဒီမှာအစီရင်ခံညစ်ညမ်း၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အမျိုးသမီး၏အုပ်စုနှစ်စု၏ဘဝအသက်တာ၌နှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် nonsexual အကြမ်းဖက်မှုများကိုလေ့လာ: တစ်ရင့်ကျက်တက္ကသိုလ်လူဦးရေထဲကနေအမိုးအကာနှင့်အဆုံးမအုပ်စုများထံမှရေးဆွဲခေတ်သုံးမြိုးသမီးမြား၏အုပ်စုတစု, နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စု။
ရိုက်နှက်ခံရသည့်အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်နှိုင်းယှဉ်သူများ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုသိသိသာသာစာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုခြင်းအားတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ရိုက်နှက်ခံရသည့်အမျိုးသမီး ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း (နှိုင်းယှဉ်မှုအဖွဲ့၏ ၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ကဤမေးခွန်းကိုအပြုသဘောဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည် -“ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှာသူမြင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းလုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုစိတ်ဆိုးဖူးပါသလား။ ရုပ်ရှင်တွေလားစာအုပ်တွေလား။ ” ရိုက်နှက်ခံရသည့်အမျိုးသမီးများသည်နှိုင်းယှဉ်သည့်အဖွဲ့မှအမျိုးသမီးများထက်ရိုက်နှက်ခံရသည့်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လက်တွင်သိသိသာသာပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။